धरहराको टुप्पामा रहेका तीन जना कसरी बाँचे ? - Enepalese.com
धरहराको टुप्पामा रहेका तीन जना कसरी बाँचे ?
इनेप्लिज २०७२ वैशाख १३ गते १८:२२ मा प्रकाशित
‘भुकम्प आउनासाथ धराहरा लच्कन सुरु भयो ।’ प्रत्यक्षदर्शी नविन थापाले भने, ‘भुकम्प सुरु भएको पाँच सेकेण्डमै धराहरा ढलिहाल्यो ।’ केही समय घुमेपछि धराहरा ढलेको उनले बताए । ‘म धराहरा अगाडि नै थिएँ, धराहरा यता, उता लच्किरहेको थियो । कता ढल्ने भन्ने थाहै भएन, शहिदगेटतिर भागे । धन्न बाँचियो’, उनले भने ।